Amarada Quduuska ah – 2kalluunka
Home / Church / Sacraments / Amarada Quduuska ah
Amarada Quduuska ah waa sacrament ah oo dadkii lagu oggolaado ama “amreen” by Church in uu fuliyo kale lix sacraments. rag waxay noqon kartaa caawiyayaasha, wadaaddadii ama kiniisadda.
Si kastaba ha ahaatee, sacrament ee Amarada Quduuska ah waxaa la sameeyaa oo keliya hoggaamiyaha kiniisadda, iyo in si toos ah raaca Kitaabka Quduuska ah ka.
Waxaa jirta waddo dadka la aasaasay Kitaabka kuwaas oo call Ilaah ee wasaaradda waxaa la siiyaa oo la helay. Wuxuu la barwaaqaysan ka timaada Ilaaha Ciise, Ciise Rasuullada, iyo Rasuulladu si hadha (arki Injiilka Luukos 10:16 iyo Injiilka Yooxanaa 13:20; 20:21). Sidaas, sacrament ee Amarada Quduuska ah lagu samayn karaa oo keliya by Rasuul ama kaliya hal kii amarka rususha ayaa shirka. Tusaale ahaan, Paul qoray in uu Letter First in Timothy (4:14), “Ha dayicin hibada aad, kaas oo uu idin siiyey by hadalka sheegid markii golaha odayaasha gacmahooday idin saaray” (arki 5:22, uu Letter labaad si Timothy, 1:6, iyo Warqad ku Titus 1:5). Sidaas, sacrament ee soo socota silsilad ah ishaysta Ciise inuu wadaad cusub ee maanta Catholic. (More on this hoos ku qoran.)
In Church hore, madaxda a horumariyo in ka koobnayd kiniisadda, presbyters (ama oday), iyo caawiyayaasha, oo Dirk in qaab-dhismeedka saddex nooc Israa'iil ee wadaadka sare, wadaaddadii, iyo kuwii reer Laawi (arki Bawlos Warqad ku Phillipians ah, 1:1; Saint James’ Warqadda, 5:14; The Book of Lambarada, 32; Book Labaad ee Taariikhdii 31:9-10).1 In Israa'iil, wadaadka loo arkay galladii gaar ah Ilaah (arki Malachi 2:7), la dhigay marka laga reebo shirkii by subkiddoodu iyo rogida gacmahaaga (arki Baxniintii 30:30 ama Sharciga Kunoqoshadiisa 34:9).
Marka la eego in Rasuulladu waxay ahaayeen Yuhuud, Church la ansixiyay caadooyinkaas Yuhuudda iyada xaflad of duwidda.
Ma ma waxaan oo dhan Wadaadada?
No, laakiin mararka qaarkood dadka la wareersan tihiin by fariin Kitaabka in rumaystayaasha oo dhan waxaa loo yaqaan si ay u wadaagaan in wadaadnimadii Masiixa. Tusaale ahaan, Saint Peter ee Letter First (2:9) goboleedyada, “Waxaad tihiin jinsi la doortay, boqorrada wadaadnimada, iyo quruun quduus ah, dadka Ilaah u gaar ah.” Erayadanu waa tixraac back to Baxniintii 19:6, “Oo waa inaad ii ahaan doontaan boqortooyo wada wadaaddo ah, iyo quruun quduus ah.”
U kaydinta maamulka si ay u qabtaan sacraments in koox gaar ah oo ay shakhsiyaad (wadaaddadii) waxaa loo yaqaan sacerdotalism.
In Axdigii Hore, yar a, wadaadnimo sacerdotal jiray quruunta weyn wadaadnimada reer binu Israa'iil gudahood. Sida aan ku sharaxo, waxaa la mid ah Axdiga Cusub waa.
Baybalku wuxuu muujinayaa wadaadnimada sacerdotal in ay nooc ka mid ah aabanimada ruuxiga ah, taas oo ah sababta Church Catholic waxa uu barayaa in duwidda wadaadnimada waxaa loogu talogalay ragga oo keliya. Tusaale ahaan, ee Axdiga Hore, ka Book of Garsoorayaasha (18:19) goboleedyada: “Haddaba na soo raac, oo noo noqo aabbe iyo wadaad ah.”
Sidoo kale, Axdiga Cusub, Paul qoray in uu Letter First in Corinthians ee (4:15) in “Waayo, in kastoo aad qabto Hanuuniyaa xad-dhaaf ah ee Masiixa, aadan haysan aabbayaal badan. Waayo, anigu waxaan aabbahaana Ciise Masiix xagga Injiilka noqday.” Paul daraa badan oo ku saabsan aabanimada ruuxiga ah ama wadaadnimadii sacerdotal bilowga cutubka isla, marka uu leeyahay, “Tani waa sida ay tahay in mid ka mid ah na fiirsan, sida addoommada Masiixa iyo wakiillada waxyaalaha qarsoon ee Ilaah” (4:1).2
Bilawga adeeggiisa, Ciise xusay in dadkii badnaa u ekaa “ido aan adhijir lahayn,” oo wuxuu ku yidhi, “beerta laga gooynayaa way, laakiin waa yar yihiin, shaqaalayaashuse; Sidaas daraaddeed Sayidka Rabbiga ahu wuxuu ku baryayaaye beergooyska u soo diro inuu shaqaalayaal beertiisa u soo galay” (arki Matthew 9:36, 37-38). hadaladiisa Kuwani arar uu doorashada ee Rasuullada tobankii, cidduu awood iyo in ka badan aamin ku soo diray sida uu adhijirrada Maynee (arkaan Injiilka Yooxanaa 21:15-17; ka Acts Rasuulladu 20:28; oo Butros Letter First 5:2). “Idinku ima aydnaan dooran,” Markii dambe waxa uu xusuusiyay, “laakiinse anaa idin doortay oo aad u magacaabay in aad tagtaan oo midho soo” (John 15:16). “Sidee nin ku wacdiyo haddaan la dirin?” Sidaas waxa qoray wargayska Paul in uu Warqad ku socota dadka Roomana, 10:15.
Meel Kitaabka uusan nin u qaadan wasaaradda inuu nafsaddiisa. “Mid ka mid ah ma qaadan sharaf isaga qudhiisa ku dul, laakiin waxaa lagu magacaabaa by Ilaah, siduu Haaruun ugu,” ku qor Paul in uu Warqad ku Cibraaniyada 5:4 (arag Warqad ku Kolosay ah 1:25, sidoo kale). Marka jinniyosaarayaal ah Yuhuudda qaarkood isku dayaan in ay ku canaanto jinniyadooda sharka leh “Ciise kan Bawlos dadka ku wacdiyo,” jinniyadu ay dhahaan, “Ciise ayaan garanayaa, Bawlosna waan aqaan; laakiin qofka aad tahay?” (Acts Rasuulladu, 19:13, 15).
Sidaas, call a sax ah wasaaradda caadi ah oo ku lug leh xaqiijinta ee madaxda rususha. Tusaale ahaan, ee Xeerka Rasuullada (1:15), Matthias ma u istaagaan oo ka soo qaado xafiiska wasiir uu guleeystay,. Waxa uu soo doortay sida ay awoodda Butros iyo rasuulladii ayaa, iyada oo ay hoggaaminayaan ee Ruuxa Quduuska ah. Midkoodna ma Paul, inkasta oo uu diinta ka riwaayado, dhigay off on isaga u gaar ah inuu wax ku wacdiyo Injiilka, sheeganaya subkiddoodu Ilaah inuu nafsaddiisa. Sida ku xusan in uu Warqad ku Galatiya ah (1:18), isagoo ah kii kowaad tagaa Yeruusaalem si ay u helaan ansixinta Rasuullada, iyo ka dib ayuu soo laabtay si loo xaqiijiyo injiilka ku wacdiyaya uu sax yahay (2:2).
Inkasta oo dhan Masiixiyiinta waxaa lagu magacaabaa in ay aaso, Rasuullada iyo kuwo ay leeyihiin call gaarka ah ee ilaalinta Deposit of Faith iyo barayay kuwa aaminka ah. In ka Injiilka Matthew (28:19-20) Ciise ayaa ku yidhi si Rasuullada, “Haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhigi, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, oo bara inay dhawraan wixii aan kugu amray oo dhan.”
Sidoo kale, in uu Letter labaad si Timothy, Paul waanin: “Dhawrsada runta in laguu dhiibay inaad Ruuxa Quduuska ah oo inagu dhex jira,… Waxa aad iga maqasheen ku hor qiratay markhaatiyaal badan dhexdood igaga nin aamin ah bal yaa awooda inay kuwa kaleeto baraan noqon doonaa.” (arki Aayado 1:14; 2:2; 1:13; iyo Acts Rasuulladu 2:42).
Dhab ahaantii, marka wasiirro uu baro waa Masiix qudhiisa bara iyaga sida uu sheegay in: “Oo kii maqlaana aad i maqla, oo kii diidaana aad, waa i diidaa,, oo kii diidaana, waa i diidaa, kan i soo diray” (Luke 10:16). Dhanka kale wuxuu leeyahay,, “Runtii,, dhab ah, Waxaan idinku leeyahay,, Kan aqbala ku mid ka mid ah kan aan u soo diri i aqbalaa,; iyo Kan aqbala ku i aqbalaa kii i soo diray” (John 13:20; xooga ku daray).
Rasuulladu waxa la siiyaa awoodda hogaaminaysa dabaal Eucharist. Tusaale ahaan, halka Asaasida Eucharist ee Cashadii ugu Danbaysay, Wuxuu iyaga ku weerakeeda, “tan u sameeya inaad igu xusuusataan” (Luke 22:19 oo Bawlos Letter First Corinthians ee, 11:23-24). Rasuulladu waxa ay qayb qaata gaar ah wadaadnimadiisa oo la waajib sare ee bixiya Allabaryo ka Eucharist ka wakiil ah kuwa aaminka ah (cf. Hayso. 5:1).3
Rasuulladu waxa ay sidoo kale ka Ciise helo xoog uu dembiyada ku cafiyo dhex hadiyadda ah furayaasha la siiyay Butros iyo awood ay ku” xidhaa oo dabacsan” shirka iyaga on koox ahaan (cf. Matt. 16:19; 18:18). “Sida Aabbuhu ii soo diray,” Oo Badbaadiyeheenna ah u sheegaysaa, “sidaas oo Waxaan idiin soo dirayaa. … Aqbala Ruuxa Quduuskaa. Haddii aad uu dembiyada ku cafiyo wixii, way cafiyan yihiin,; haddii aad hayn dembiyadii kasta, way ceshan yihiin” (John 20:21-23; xooga ku daray).
In kastoo tirada buuxda oo xafiiska rususha oo dhan gacmaynayso ay lama maray hoos, kiniisadda ah, sida kuwo si toos ah Rasuullada, ku hadhay madaxa madaxda. ↩
eraygii “qarsoodiga,” in Greek, mysterion, loo tarjumay sida ee Latin qarsoodiga ama “sacrament.” Orthodox Greek waxay sii wadi ilaa maantadan la joogo in ay tixraac sacraments sida xurmada leh ee “Waxyaalaha qarsoon.” ↩
view Baybalka ee Eucharist sida Allabaryo a (cf. waqtiga. 1:11; 1 Korintos. 10:1-5, 15-22; 11:23-30; Hayso. 10:25-26), dhab ahaan, dhibcood oo dheeraad ah si ay jiritaanka iyo wadaaddada sacerdotal–joogitaanka of allabari loogu baahan yahay iyo wadaaddada si ay u bixiyaan. Pope Saint Clement, qoraal Rome ka ee ku saabsan sanadka 96, si cad u kala duwanaayeen inta u dhaxaysa Allabaryo ka Eucharist ay bixiyaan aawadeed wadaadnimadii waa wasiir iyo allabaryo ruuxiga ah ee ay bixiyaan wadaadnimada Subkista (cf. Letter Clement ee Corinthians ee 40-41). Fahan Allabaryo ka Eucharist, non-Catholics mararka ashtakeeyaan Catholics ah “dib-u-ku allabaryaya” Ciise at Mass. Waaqdhaca Eucharist ma aha a dib-u-ku allabaryaya, Si kastaba ha ahaatee, laakiin dib-u-soo bandhigga hal Allabaryo leeyay. Masiix uusan mar kale u dhintaan; Uu badbaadinayo jidh iyo dhiig la sameeyey jooga meeshii allabariga hoosteeda ku saftay cunto iyo khamri si may aaminka “muujinaysaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado” sida Bawlos wuxuu u qoray in uu Letter First in Corinthians ee (11:26). ↩